Sida loo Beddelaan M4V in Lugood
M4V, MPEG 4-file kordhiyo, waxa loo isticmaalaa videos bixi ama ka iibsaday dukaanka Apple iTunes ka mid ah music videos, filimada, iyo dhacdooyin TV iwm Waxaa la mid ah file MP4 ah, laakiin farqiga u yahay waxaa laga yaabaa in file koobi-ilaaliyo a iyadoo la isticmaalayo ilaalinta copyright FairPlay DRM Apple ee. In kastoo M4V waxaa loogu talagalay by Apple Inc, weli ma dhammaan oo ka mid ah waxa soo saarey Apple. Haddii ay dhacdo in aad hesho qaar ka mid ah files M4V in aan la keeno karo in Lugood, ka dibna waa in ay sida ugu gudaha kelmadaha aan waafaqsanayn Lugood.
Si aad si fudud oo dhaqso u xaliyaan dhibaatada, waxaad iyaga u bedeli karaan in files Lugood M4V la adag iyo dareen video Converter. Halkan, ka akhri keliya maqaalka si aad u hesho M4V ugu wanaagsan ee Lugood video Converter.
Qeybta 1: Hel Best & Professional M4V in ay Lugood Converter
Qeybta 2: M4V Free in Lugood Converter
Qeybta 3: Online M4V in Lugood Converter
Professional video Converter: Waxaad u isticmaali kartaa si loogu badalo wax video in Lugood qaabab socon, MOV, M4V, MP4, H.264 iyo MPEG-4.
Wax soo saarka sare ee video tayada: Waxaa diinta caadi ah, 3D iyo HD videos. Sidoo kale qalab badasha videos aan laga badinin video tayada asalka ah.
Xawaare sida dhaqsaha badan: Waxay noqon kartaa video oo dhan u tartameen la 30X ugu dhaqsiyaha badan xawaaraha diinta Converter ugu dhaqsiyaha badan.
Xoog video editor: Waxaad ka bedel kartaa video leh sifooyinka video tafatirka sare, falinjeeerka, lana siii, isagoo intaa ku daray saamaynta, qoqobada, iyo in ka badan.
Video inay DVD gubi: Waxaad kaliya qaadan karaan qalab ay gubaan video inay DVD la arrimo badan oo menu.
Sida loo badalo M4V in Lugood
1. Ku dar files M4V in M4V in ay Lugood video Converter
Fiiro gaar ah: Dufcaddii diinta waxaa lagu taageeray, aad dajiyaan karaa in ka badan hal file hal mar. Haddii aan wax qumman, oo ku dhacay "Delete" button inaad ka saartid.
2. U samee qaab wax soo saarka aad ka jeeclaadeen
Riix Qaabka icon in la furo suuqa kala qaab wax soo saarka, ka dibna riix nooca qaab si ay u helaan liiska qaab hoos-hoos. In ka "Video" column, heli qaab Lugood M4V oo Doorto, qaab wax soo saarka.
Haddii aad qorsheyneysid inaad iyaga soo dhoofsadaan in aad iPod, iPad, ama iPhone, kaliya aad u dooran kartaa presets filaayo iyagii "Qalabka" category halkii. Waxay si fiican u ciyaari doonaa in qalabka macruufka aad.
Talooyin: barnaamijkan sidoo kale siisaa hawlaha tafatirka kaas oo awood kuu inuu wax ka beddelo saarka video. Qalabka tafatirka Common waxaa la siiyaa: dalagga, jar, saamayn, watermark, subtitles (guji badhanka image Edit dhankiisa midigta oo ah video kasta item).
3. Start si loogu badalo M4V in Lugood
Marka dhan beddelid loo baahan yahay oo dhameystiran, oo kulli wixii uu kaga tegey inay hadda samayso waa guji "Beddelaan" button. Barnaamijkan waxa aad u hufan ee diinta iyo bar horumarka idin tusin doonaa boqolkiiba iyo waqtiga soo hadhay.
Markii diinta dhameystiray, waxaad riixi kartaa ah "Output Open" si ay u helaan faylasha aad diirada iyo kuwaa oo si Lugood u siman loo maqli karo. Waa intaas.
Haddii aad rabto in aad ka files gediyay lagu daray Lugood si toos ah, fadlan tag "Finder" in bar menu ka dibna dooro "rabtid ...". Daaqadda goobta, guji "Beddelaan" menu, iyo hubi "Add Faylal ay si Lugood Library qaab beddelidda kadib", ka dibna riix OK on.
Barnaamijkan waxa cross-madal, haddii aad isticmaalayso nidaam Windows, ayaa kuu gudbin kara User Guide in Windows wixii faahfaahin dheeraad ah.
Ka sokow diinta M4V videos, taas Video Converter u Mac taageertaa dhammaan qaab video / audio, waxaad sidoo kale Macdan karaa music asalka ama wada hadal classic ka video files, oo iyaga u dhoofiyaan sida WMA, MP3, M4A, iwm
Video Tutorial: Sida loo Isticmaalo M4V in ay Lugood Converter
# 1. Free M4V in Lugood Converter: Wondershare Video Converter Free
Tani waa M4V aad u pratical oo faa'iido leh oo bilaash ah si ay u Lugood video Converter. Waxaad u isticmaali kartaa si lacag la'aan ah loogu badalo M4V in Lugood, xaalkaa videos leh video tafatirka classic, oo kala soo bixi videos ka badan goobaha video qaybsiga.
Pro: M4V gabi ahaanba xor ah u Lugood video Converter
1.It kuu ogolaanaysaa inaad badalo M4V oo dhan videos caadi ah, laakiin ma waxaad isticmaali kartaa si loogu badalo in ay 3D iyo HD videos.
2.Beerta asalka video tayada lumin laga yaabaa.
3. Waxaad looma oggola inay isticmaalaan gubashadii DVD ah function.
Sida loo soo dejinta Movie in Lugood
avchd Talooyin iyo tabaha Panasonic
Waa maxay qaabka AVCHD ama soo gudbin?
Sida loo Play wmv Faylal ay ku OS X Yosemite
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan M4V in Lugood